ဂုဏ်ထူးဆောင်ရေအောက် Treadmill- - Qingdao Fitmax
aqua Walker က
aqua Bike- ဂုဏ်ထူးဆောင်
aqua Bike- ဖက်ရှင်
ရေအောက် Treadmill- ဂုဏ်ထူးဆောင်
ဂုဏ်အသရေအတွက်ရေအောက်ပြေးစက်၏ကိုယ်ထည်ဘောင် 316L သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလက်ကိုင် Integrated ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်အချေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့ electrolytes ပွတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအပြေးစားပွဲလွယ်ကူသောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အာကာသချွေတာရေးအဘို့ခေါက်နိုင်ပါတယ်။ အပြေး Mor ချောမွေ့စွာလှိမ့ဝက်ဝံနဲ့ကအနှိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးပါသည်။
1. Dimension: 1430x612x1470mm
2. Net ကအလေးချိန်: 42kg
3. စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 55kg
က) Frame က: သံမဏိ 316L, သံမဏိပိုက်၏အထူ: 1.5mm
ခ) roller & bearing: သံမဏိ 316L
ဂ) ခါးပတ်ကို run : နိုင်လွန်ခြင်းနှင့်ဖိုက်ဘာမှန်
5. Surface ကကုသ: brush, Electrolytic အရောင်
6. အာမခံ: 1 နှစ်
7 အထုပ်: တင်သွင်းမြှောင်းပုံစက္ဏူထူနှစ်ချက်အလွှာကတ်ထူပြား။ Dimension: 870x640x460mm, 1340x680x170mm, set ကိုတစ်ဦးလျှင်နှစ်ဦးကိုပုံး, 54Sets / 1x20GP
အဆိုပါရေအောက်ပြေးစက်ကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ Anti-သံချေးကာကွယ်မှု featuring အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ AISI316L နှင့်အတူထုတ်လုပ်နေသည်။ ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်ထုတ်ကုန်များ၏သက်တမ်းနှင့်အလှအပအာမခံဖို့လျှပ်ချောနှင့်ဆန့်ကျင်တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအပေါ်ယံပိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအပြေးနေချိန်မှာခါးပတ်အပြေးအစဉ်အမြဲနှင့်တည်ငြိမ်ရေးကိုအာမခံသံမဏိဝက်ဝံနှင့် roller, နိုင်လွန်နှင့်ဖိုက်ဘာမှန်တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
foldable အလွယ်တကူလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကြမ်းပြင်အာကာသနှင့် roller တက်လွှတ်ပေးခြင်း။ ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ဖောက်သည်များအတွက်အဆင်ပြေအားကစားအတွေ့အကြုံကိုပေး။
အဆိုပါရေအောက်ပြေးစက်ဒီတော့အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောဟိုတယ်, Spa မ်ား, ရေကူးကန်, ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးကလပ်, အပန်းဖြေကလပ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာများ, ပင်မစာမျက်နှာ, ကျောင်းများ, အားကစားအသင်းများအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောသောနေရာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
aqua ကြံ့ခိုင်ရေးကရေထဲမှာအားလုံးကြံ့ခိုင်ရေးအတန်းအတူတူဆောင်တတ်၏, အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ aqua ကြံ့ခိုင်ရေး, ဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာအားကောင်းလာစေရန်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ် ဇီဝဖြစ်စဉ်စည်းမျဉ်း, အတောအတွင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကပျက်စီးလျှော့ချပေးပါတယ်။ aqua ကြံ့ခိုင်ရေးအမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်း (စက်ဘီး, ပြေးစက်, ဘဲဥပုံစံဖိနပ်, etc) ဖြင့်ဖျော်ဖြေလျက်ရှိ၏ ကပျော်စရာအားကစားဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရေအောက်ပြေးစက်ဂန္ပြေးလှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထုတ်ပေးနှင့်သင့်အဆစ်အပေါ်မျှစိတ်ဖိစီးမှုကိုထည့်လေ့မရှိ, ခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက်နှင့်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ aqua ပြေးလည်းအားလုံးအားကစားများအတွက်တစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်သင်တန်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ဒဏ်ရာကာကွယ်တားဆီးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေပြေးသည်သူ၏ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ကိုဆုံးရှုံးစရာမလိုဘဲ recover တစ်ခုဒဏ်ရာရသူအားကစားသမားကူညီပေးသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်, osteoarthritis ၏ကုသမှု, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး, နောက်ကျောနှင့်တင်ပါးဆုံရိုးဒဏ်ရာ, aqua ကြံ့ခိုင်ရေး, ယေဘုယျအားဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ, အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းရောဂါနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှု: ဒါဟာအထူးသဖြင့်အဘို့ညွှန်ပြနေသည်။
ယခင်: ရေအောက် Treadmill- ဖက်ရှင်
နောက်တစ်ခု: Underwater Treadmill For Dogs- SC280
anti-သံချေးသံမဏိ Aqua စက်ခါးပတ်
ရေအောက် Aqua စက်ခါးပတ်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-0532-8908 3155
ဖက်စ်: + 86-0532-8776 9999
Skype ကို: Lambo_jason